Ukungeniswa kwe-Annealing Brass Bullet Shells yokuTshisa
Uqheliso lweeShell zeBullet zeShell
Ukuchithwa kwe-Annealing Brass Bullet Shells Ukutshisa unyango lwe-UHF Series kunye ne-Induction Heating System
Injongo yeNqaku leSicelo:
ImvelisoIigobolondo zeebhulethi zobhedu ziyafuna hlaziya ekhoyo izixhobo zokufudumeza kwaye ijonge ukuphucula ukusebenza ngokukuko. Gioli Olu vavanyo lwesicelo ngu ukubonisa ukuba Inkqubo ye-DW-UHF-6KW-III iya kuhlangabezana kwaye igqithe kwiimfuno zayo zokuphumeza phuculwa Amaxesha okufudumeza kunye nokugcina ukufana kobushushu ngaphakathi kwendawo ekujoliswe kuyo. Two Ubukhulu of ixina iimbumbulu iigobolondo zisetyenziselwe uvavanyo - bulusu istilis nge 1.682 " (4I-2.7 mm) ubude Kunye ne0.929" (23.5 mm) ubude. Ixesha lokujolisa ekujoliswe kulo yi0.6 Imizuzwana omabini la macandelo usebenzisa ukufudumeza enye coil.
I-HLQ DW-UHF-6kW-III umoya opholileyo lokutshisa isixokelelwano was isetyenzisiwe kwinkqubo yokubamba. Tempilaq ukupeyinta wayeqhele misela ukuba unqwenela iqondo lobushushu kwindawo evalelweyo kufikelelwa kuyo.
Iigobolondo zeembumbulu zobhedu zazibekwe kwindawo i-coil coil. Indawo eya kuhlonyelwa took malunga neepesenti ezingama-60 zobude benxalenye ukubala ukusuka esiphelweni. The Indawo eshushu yayipeyintiwe kunye Tempilaq loluphi uncedoed us vavanya ubushushu usasazo. Omabini la macala afikelele ngempumelelo kubushushu ekujoliswe kubo of 750 °F (398° C) nge-0.6sec. Kuba le Inxalenye encinci, umbane wehliswa ukuya kwi-45% ukunqanda le Ubushushu besahlulo.
Ngokubanzi, eyona njongo iphambili yokungenisa ubushushu kunyango kukususa isinyithi, ukuvuselela izakhiwo zentsimbi ezifudumeleyo okanye ukususa nje uxinzelelo lwangaphakathi.
Ngokusisiseko iqulathe ukufudumeza ubushushu obugqithisileyo (800ºC kunye no-950ºC ngokuxhomekeke kuhlobo lwesinyithi), kulandele ukupholisa kancinci.
Ukunyuselwa kweNkcazo yinkqubo yokunyanga ubushushu ebandakanya ukufudumeza izinto ezingaphezulu kweqondo lokushisa kwakhona. Injongo yokufikelela kunye nokugcina ubushushu obufanelekileyo ixesha elaneleyo lilandelwa kukupholisa okufanelekileyo. Ihlala isetyenziswa kwisinyithi nakwizinto zesayensi ukwenza ukuba isampulu ephathwayo isebenze ngakumbi ngokunciphisa ubunzima bayo kunye nokwandisa amandla ayo (ukubanakho ukutshintsha utshintsho ngaphandle kokuqhekeka).
I-Annealing iguqula imeko ebonakalayo kwaye ngamanye amaxesha yeekhemikhali zezinto ezibonakalayo njengoko ukuphinda kwenziwe kwakhona kufunyenwe ngexesha lokupholisa. Ke ngoko, izakhiwo ezizayo zeealloys ezininzi, kubandakanya i-carbon yentsimbi, zombini zixhomekeke kubushushu nakwizinga lokupholisa. Izinyithi ezinesinyithi, ezinje ngentsimbi, zifuna ukupholisa kancinci ukuya kwi-anneal. Ezinye izinto (umz. Ubhedu, isilivere) zinokupholiswa kancinci emoyeni okanye zicinywe ngokukhawuleza emanzini.
Ukufudumeza induction kubonelela ngolawulo oluphuculweyo lwenkqubo yokubamba. Iiprofayili zokuphinda ubushushu zinokufumaneka ngokulawulwa ngokuchanekileyo kwamandla okufudumeza. Kuba i-workpiece ishushu ngokuthe ngqo kumazibuthe, impendulo ekhawulezileyo inokufezekiswa. Ngaphaya koko, ukusebenza okuphezulu ngokupheleleyo kwenkqubo yokufudumeza ungeniso kubalulekile kunyango olude.
Xa kuthelekiswa noninzi lweendlela ezisemgangathweni, ukufakelwa kwe-induction yinto ecocekileyo kwaye kulula ukuyenza, indlela yokunxibelelana nokubonelela ngomgangatho ophezulu wezinto zokusebenza eziphathwayo.
Ukuchithwa kwezinto ezifudumeleyo zokufudumeza:
Kwenziwe ngokuhambelana nolawulo lweeparamitha ngexesha lokwenyani
Iziphumo zeMetallurgical ezifana nezo zifunyenwe kwii-ovens eziqhelekileyo
Ngaphantsi ungcoliseko lwendalo
Ukwandisa ukusebenza kwamandla
Ukunciphisa ixesha lokuqhubekeka
Amandla okulawula ubushushu, ukuchaneka kobushushu
Amandla okufudumeza indawo ezincinci ngaphandle kokutshintsha iimpawu zenxalenye eseleyo
Ukujikeleza ngokuchanekileyo nokuphindaphinda ubushushu
Ukuncitshiswa komhlaba igcwala
Ukuphuculwa kwendalo yomsebenzi
Amanye amashishini ahambelana nayo yityhubhu kunye nombhobho, amayeza, ioyile kunye negesi kunye neemoto.
iindidi Teknoloji tags ku lathisa, ubhedu olukhazimlayo, iqokobhe lembumbulu lobhedu, I-Annealing Brass Bullet Shells, induction elenzelwe ubhedu, iqokobhe lobhedu elenzayo, isifudumezi sobhedu, I-bullet ye-annealing yoqheliso, Thenga isifudumezi sokungenisa ngaphakathi, uhlengahlengiso, induction elenza ubhedu, Uqheliso lweebhokhwe zobhedu, Uqheliso lweeqokobhe Post yokukhangela
Iibrabhu zeAluminiyam zeBrazil kunye ne-Induction Heating